Rita, Writing for My Sake!: ဆူးတွေပါတဲ့ လှည်း
Posted by Rita at 10/06/2010 06:27:00 PM
အမယ်လေး ကြောက်စရာ ဆူးကဗျာ ပါ့လား ကဗျာလေး ကလှပေမဲ့ ကြောက်
ခုန မန့်တာ ဝင် မဝင် မသိလို့ ပြန်မန့်လိုက်တယ် မရီတာရေ
ကဗျာလေး ကလှပေမဲ့ ကြောက်စရာ ဆူးလှည်း ပါလား
ကိုယ်ကဘေးကလဲ မဟုတ်ဘူး ချစ်သူလဲ မဟုတ်ဘူး။ ဆိုတော့ အေးဆေးပဲ ဒါပေမယ့် သတိတော့ထားတယ်။ တော်ကြာ ဆူးလှည်းလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်သွားမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ်။ ဂယ် ။
ငြိမ်းချမ်းပါစေ မရီတာ ရေ
ရှင်းပြကာမှ မျက်စိကိုလည်ရော. မနည်းစဉ်းစားရတယ။် ကဗျာလေးကောင်းတယ်။
ဒါတွေ မမ လိုက်မမီဘူး
ကဗျာလေးကို ကြိုက်တယ် ရီတာရေ့။ ကျနော့်ကိုလည်း မိုးချိုသင်းက တခါက အဲသည်နာမည် ပေးဖို့ ကြိုးစားဖူးတယ်။
အောက်က မှတ်ချက်တွေ နားမလည်
“ချစ်သူကို ငြိလိုက်မယ့်ဆူး” ကို ကြိုက်တယ်။
ငါ အမြဲမှန်၊ ငါလူသန်ဟု
ကိုယ်သာ အမြဲမှန်လို့တော့ တခါမှ မပြောခဲ့ဖူးဘူး ထင်တာပဲ PA ရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူများ ကိုယ်ဆွဲကိုင်ထားတဲ့ အယူအဆကို လွယ်လွယ် ပြောင်းလဲပြီး ကိုင်းကူးနိုင်ပါသလဲ။ ကိုယ်ယူဆတာ သူများအတွက် မှန်ချင်မှန်မယ်၊ မှားချင်မှားမယ် ဒါပေမဲ့ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်သရွေ့ ဆုပ်ကိုင်ထားမှာပဲ။ ဒါလူတိုင်း လုပ်ကြမယ့် အလုပ်ပဲ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းသာ ကွာချင်ကွာမယ်။
PA ရော ကိုယ်မှန်တယ်ထင်လို့ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့အယူအဆကို မှန်နေတယ် ထင်သရွေ့ လွယ်လွယ်နဲ့ လက်လွှတ်တတ်သလား။
ဒီကဗျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံး ပိုစ့် ကွန်မင့်မှာ ကျနော်ရှင်းပြထားတယ်လေ..
ကျနော့်သူငယ်ချင်းကို ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ။။
ဆူးလို့ တွေ့တာနဲ့ သတိယပြီး ရေးလိုက်မိတာ။
ကျနော်ကတော့ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ပေမဲ့ သူများက မတူတဲ့ ရှု့ထောင့်က ကြည့်ပြီး ပြောလာခဲ့ရင် တကယ်မှန်တာ သူလား ကိုယ်လား ပြန်သုံးသပ်တယ်။ ဘယ်သူတဦးတယောက်မှ အကြွင်းမဲ့ မှန်မနေနိုင်ဘူးဆိုတာ ယုံကြည်လို့ပဲ။
(နောက်ဆုံး ပိုစ့် ကွန်မင့်မှာ ကျနော်ရှင်းပြထားတယ်လေ..) ဆိုတာ ကိုယ် မသိပါ။
(ကျနော်ကတော့ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ပေမဲ့ သူများက မတူတဲ့ ရှု့ထောင့်က ကြည့်ပြီး ပြောလာခဲ့ရင် တကယ်မှန်တာ သူလား ကိုယ်လား ပြန်သုံးသပ်တယ်။ ဘယ်သူတဦးတယောက်မှ အကြွင်းမဲ့ မှန်မနေနိုင်ဘူးဆိုတာ ယုံကြည်လို့ပဲ။)
PA ရဲ့ အတွေးအမြင် အမူအကျင့်ဟာ လေးစားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ရွဲ့ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ကတော့ အဲလို မလုပ်ပါဘူး။
ဒီတော့ အဲဒီလို သုံးသပ်တတ်တဲ့ PA အနေနဲ့ ကိုယ့်လို ကိုယ်သာလျှင် မှန်တယ်ထင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို အချိန်ကုန်ခံ တရားချရင်း လာရိနေတာ မှန်/ မမှန် အကျိုးရှိ/ မရှိ သုံးသပ်နေဖို့ ကောင်းတယ်။ အချိန်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ။
ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ရှုထောင့်က မှန်နိုင်သလို၊ သူလည်း သူရှုထောင့်က မှန်နိုင်တယ် ဆိုတာ တော့ ကိုယ်လက်ခံတယ်။ ဒါ ပြန်ကြည့်စရာ မလိုအောင်ကို စိတ်ထဲ ရှိထားတဲ့ ကိစ္စပါ။
ကိုယ်ကလည်း သူများရှုထောင့် အမှားကြီးလို့ ဝင်မထောက်သလို၊ ကိုယ့်ကို ဒါမျိုးလာထောက်ရင်လည်း လွယ်လွယ် လက်ခံမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အယူအဆဆိုတာ လွယ်လွယ် ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေ မဟုတ်ဘူးလေ။
ကိုယ်ပြောသမျှ၊ ဆုတ်ကိုင်လိုက်သမျှဟာ ကိုယ်မှန်တယ် ထင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေချည်းပဲ၊ ကိုယ်မှန်တယ်ဆိုတာ သူများကို မှားတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကို နားမလည်ရင်တော့ ကိုယ်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။
Any one who disturb to others (whether intentionally or not) to should not used normal route.
A farm vehicle full of bushes with thorns must be properly secured and lashed.
It must be used other way.(special way)
If not providedaspecial way, she should be used different time.
eg. Sun set to Sun rise
The local authority must drawarule as special traffic way to avoid interference others.
Please do not impede others.